ग्लोबल आईएमई र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच सम्झौता- बजार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — ग्लोबल आईएमई बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच मुक्तिनाथका ग्राहकहरूलाई आवश्यक पर्ने गैरकोषमा आधारित बंैकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौताअनुसार मुक्तिनाथको सिफारिसमा ग्राहकहरूले आफ्नो व्यवसायलाई आवश्यकता पर्ने गैरकोषमा आधारित प्रतीत पत्र, बैंक ग्यारेन्टी, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट, ट्रेड ट्रान्ज्याक्सन बैंकिङलगायत सुविधा पाउनेछन् ।
यसका साथै बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १३.५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा पनि गरेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ १०:१४
साफ च्याम्पियनसिप : फाइनल कति नजिक तर अझै कति टाढा ?
आश्विन २६, २०७८ हिमेश
माले, माल्दिभ्स — सबैको मनमा लागेकै हुनुपर्छ, के नेपालले भारतविरुद्ध यति धेरै रक्षात्मक खेल्नु ठीक थियो त ? खेल्न त नेपालले साफ च्याम्पियनसिप २०२१ मा माल्दिभ्सविरुद्ध पनि यस्तै खेलेको थियो । फरक के भने माल्दिभ्सविरुद्ध ठ्याक्कै गोल निस्कियो, भारतविरुद्ध निस्केन । उल्टै पराजित रह्यो ।
यो अर्थमा रणनीतिलाई लिएर गनगन नगरेकै राम्रो । फेरि फुटबलमा ‘यदि र तर’ भन्ने पनि हुन्न । जे भयो, भयो, त्यसलाई पछाडि छाड्नु नै ठीक । सायद यस्तो प्रश्न निस्कनेछ भनेर प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीलाई पनि लागेको थियो, त्यसैले उनले भनिहाले, ‘म सबै नेपाली फुटबल समर्थकलाई भन्न चाहन्छु, यो हारको दोष खेलाडी कसैलाई नदिनु । यसको दोष खालि मेरो मात्र हो । म हाम्रा खेलाडीको आलोचना भएको हेर्न सक्दिनँ । बरु मेरो चर्को आलोचना गर्नु त्यसले केही फरक पर्दैन । म सहन्छु । तर खेलाडी कसैलाई केही पनि नभन्नु, उनीहरूलाई दबाब दिनु ठीक हुन्न ।’
हो, यहाँनिर दबाब शब्दले धेरै अर्थ राख्छ, किनभने नेपालका लागि यसपल्टको साफ च्याम्पियनसिपमा केही पनि बिग्रेको छैन । सेमिफाइनलको सम्भावना खुला छ । नेपालको तीन खेलबाट ६ अंक छ र अब एक अंकले नेपाललाई फाइनल पुर्‍याउनेछ । माल्दिभ्सको पनि समान ६ अंक छ, तर गोल अन्तरले आयोजक टिम नेपालभन्दा अगाडि छ । यसपल्ट ‘हेड टु हेड’ नियम नै लागू छ, तर अन्तिम दिनको खेल अगाडि त्यसको खास अर्थ हुने छैन ।
साँच्चै, फाइनलमा नेपाल र भारत पुगे भने के यी दुई प्रशिक्षक बाझाबाझको स्थितिमा पुग्नेछन् त ? अहिले तत्कालका लागि मूल सार हो, नेपालका लागि फाइनल कति नजिक त छ, तर अझै धेरै टाढा पनि छ । यहाँनिर भने अल्मुताइरी शान्त देखिन्छन् र दुई हात बिस्तारै तलमाथि गरेर सबैलाई ‘कुल कुल’ भन्छन् । उनको भनाइ हो, नेपालले सुरुआती दुई खेल जितेको हुनाले सबै उत्साहित भइहाले । अझै पनि केही ब्रिगेको छैन । बंगलादेशविरुद्ध नेपाल आफूलाई चाहिने नतिजा निकाल्न सक्षम छ ।